Global Voices teny Malagasy » Azerbaijan: Bilaogera roa voasazy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Janoary 2019 17:06 GMT 1	 · Mpanoratra Onnik Krikorian Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azerbaijan, Hafanam-po, Mediam-bahoaka
Araka ny efa natahoran'ny ankamaroan'ny mpanohana azy ireo, dia efa nanameloka an'i Adnan Hajizade  sy Emin Milli  sahady ny fitsarana iray any Baku, Azerbaijan ary ny andro nanaovana ny adihevitra momba ny raharaha  hanenjehana ireo tanora mpikatroka roa amin'ny fibilaogina lahatsary.
Media Helping Media naneho hevitra haingana momba ny sazy: 
Araka ny nolazain'ireo mpanohana nisioka tao amin'ny fitsarana, nilaza ny mpisolovavan'i Hajizade, Isahan Ashurov fa resaka fahefana ilay raharaha.
“Nanatri-maso tolona tsy ara-drariny eo amin'ny herin'ny fanahy sy ny tanjaka ara-batana isika androany.”
Nisioka ireo mpanohana fa naorina tambonin'ny lainga ny fanapahan-kevitra araka ny filazan'i Hajizade.
Flying Carpets and Broken Pipelines nandinika ny didim-pitsarana ihany koa  ary nilaza fa “tsy farany izao, fa vao fiandohana ihany.”
Androany tamin'ny fiafaran'ny fotoam-pitsarana, nilaza i Emin fa mahatsiaro afa-po izy ary izany no mahatonga azy vonona hanaiky ny didim-pitsarana nomena azy. Adnan, indray nanontany ny amin'ny fijerin'ireo lazaina fa mpijoro vavolombelona ny mason'ny fianakavian'izy ireo- vita ny aminay noho ny sazy azonay saingy manontany tena aho hoe ahoana no iainan'izy ireo fiainana miorina amin'ny lainga… Samy nampiseho ny heriny taminay izy roa tonta, tsy maintsy manao izany koa izahay ho setrin'izany.
Mandritra izany, dia namoaka fanambarana vonjimaika  ny World Blogging Forum voalohany ao Bucharest, Romania.
Izahay, bilaogera, dia hampiroborobo tontolo izay ahafahan'ny mpampiasa aterineto hankafy fahalalahana miteny sy finoana ary ny fahafahana amin'ny tahotra sy ny famaizana amin'ny endrika rehetra.
Manahy mikasika ny toe-draharaha ao Azerbaijan ireo bilaogera tafaray eto Bucarest ao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra momba ny fibilaogina eran-tany (World Blogging forum) ary manohana an'i #EminAdnan amin'ny maha-Feo Malakaka amin'ny Aterineto sy mpikambana ao amin'ny Fianakavian'ny Bilaogy Manerantany.
Nahita an'i Parvan Persiani OL! tanora mpikatroka sady sipan'i Hajizade nandritra ny valandresaka omaly ny Global Voices .
Ho avoaka eny ihany ny vaovao farany. Mandritra izany, azo jerena ao amin'ny sehatra Azerbaijan ao amin'ny Global Voices sy ao amin'ny OL! Bilaogy (amin'ny teny Anglisy  sy Azeri ) ny fitantarana feno momba ny fisamborana, fitsarana ary fanagadrana an'i Adnan Hajizade sy Emin Milli. Ampiasaina ao amin'ny Twitter ihany koa ny tenirohy #EminAdnan .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/30/134289/
 nanaovana ny adihevitra momba ny raharaha: http://www.ceu.hu/events/2009-11-11/hooliganism-or-freedom-of-speech-the-case-of-two-bloggers-detained-in-azerbaijan
 naneho hevitra haingana momba ny sazy:: http://www.mediahelpingmedia.org/content/view/528/2/
 nandinika ny didim-pitsarana ihany koa: http://flyingcarpetsandbrokenpipelines.blogspot.com/2009/11/verdict.html
 namoaka fanambarana vonjimaika: http://worldbloggingforum.com/world-bloggers-support-for-eminadnan/
 Nahita an'i Parvan : http://www.youtube.com/watch?v=wAckYZw_2DY
 sehatra Azerbaijan : https://globalvoicesonline.org/-/world/central-asia-caucasus/azerbaijan/